ज्योति विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १९ असार २०७६)
१ वर्षको कारोबार अवधिमा बैंकको शेयरमूल्य अधिकतम रू. १६५ र न्यूनतम रू. १३२ पुगेको छ । बुधवार बैंकको शेयरमूल्य रू. १५८ कायम भएको छ । सो दिन बैंकको ८ हजार ४५८ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । बैंकले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई ८ दशमलव ४० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । बैंकले हाम्रो विकास बैंकलाई एक्विजिशन गरी ज्योेति विकास बैंकको नामबाट २०७५ चैत १५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गरेको छ । बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. २८ करोड ५३ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवकोे सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा रू. २२ करोड २४ लाख थियो । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । बैंंकको चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब १० करोड पुगेको छ ।